Igama lesiqhelo: I-levonorgestrel inkqubo ye-intrauterine (i-LEE voe kunye ne-YES trel kwi-SIS tem)
Igama lebrand: UKyleena, uLiletta, uMirena, uSkyla
Udidi lweziyobisi: Izinto zokuthintela ukukhulelwa , Iprogestins
NguMedical, MD; Uvavanywe nguVexxcare.cz ngoJuni 29, 2021. Ibhalwe nguCerner Multum.
I-Levonorgestrel yihomoni yabasetyhini enokubangela utshintsho kumlomo wesibeleko nakwisibeleko. I-Kyleena okanye isixhobo se-intrauterine (IUD) sibekwa esibelekweni apho sikhupha kancinci khona ihomoni.
UKyleena usetyenziselwa ukuthintela ukukhulelwa iminyaka emi-3 ukuya kwezi-6. UMirena isetyenziselwa ukunyanga ukuphuma kwegazi okunzima kwabasetyhini abakhetha ukusebenzisa uhlobo lwangaphakathi lokulawula ukuzalwa.
I-Levonorgestrel ayinayo i-estrogen kwaye ayifanele isetyenziswe njengolawulo lokuzalwa ngokukhawuleza.
I-Kyleena inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo sonyango.
Sukuyisebenzisa ngexesha lokukhulelwa. Tshela ugqirha wakho ngoko nangoko ukuba ukhulelwe.
IUD inokuwunyusa umngcipheko wokuba nosuleleko lwe-pelvic, olunokubusongela ubomi bakho okanye amandla akho okuba nabantwana kamva. Buza ugqirha wakho malunga nale ngozi.
Sukuyisebenzisa ngexesha lokukhulelwa. Ukuba ishiywe endaweni ngexesha lokukhulelwa, le IUD inokubangela usuleleko olunzima, ukuphuma kwesisu, ukuzalwa ngaphambi kwexesha, okanye ukufa kukanina. Ihomoni ekwi-IUD inokubangela iziphumo ezingafunekiyo kusana olusana olusana.
Tshela ugqirha wakho ngoko nangoko ukuba ukhulelwe. Ukuba uyaqhubeka nokukhulelwa, jonga imiqondiso enjengomkhuhlane, ukugodola, neekram, ukopha kwilungu lobufazi okanye ukukhupha.
Akufanele usebenzise esi sixhobo ukuba uxabisa i-levonorgestrel, i-silicone, i-silica, isilivere, i-barium, i-iron oxide, okanye i-polyethylene, okanye ukuba unayo:
ukopha okungaqhelekanga kwilungu lobufazi okungakhange kuhlolwe ngugqirha;
usulelo lwe-pelvic olunganyangekiyo okanye olungalawulwayo (ubufazi, umlomo wesibeleko, isibeleko);
i-endometriosis okanye usulelo olubi lwe-pelvic emva kokukhulelwa okanye ukuqhomfa kwiinyanga ezi-3 ezidlulileyo;
isifo sokudumba (PID), ngaphandle kokuba ubunokukhulelwa okuqhelekileyo emva kokuba unyango lunyangwe kwaye lwasuswa;
amathumba wesibeleko se-fibroid okanye iimeko ezichaphazela ukumila kwesibeleko;
umhlaza odlulileyo okanye wangoku webele, umlomo wesibeleko, okanye isibeleko;
isifo sesibindi okanye ithumba lesibindi (elibi okanye elibi);
imeko ewenza buthathaka amajoni akho omzimba, afana noGawulayo, Ileukemia , okanye ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi nge-IV;
ukuba unesinye isixhobo se-intrauterine (IUD) endaweni;
ukuba ukhuphe isisu okanye ukuphuphuma kwesisu kwiiveki ezi-6 ezidlulileyo; okanye
ukuba ubeleke umntwana kwiiveki ezi-6 ezidlulileyo.
uxinzelelo lwegazi oluphezulu, iingxaki zentliziyo, a ukuhlaselwa yintliziyo , okanye ukubetha;
migraine intloko; okanye
usulelo lobufazi, usuleleko lwesisu, okanye isifo esidluliselwa ngeentlobano zesini.
Musa ukuncancisa de kudlule iiveki ezi-6 okokuzalwa komntwana wakho. Umngcipheko weengxaki zesibeleko ukusuka ekufakweni kwe-IUD mkhulu xa uncancisa.
Usetyenziswa njani uKyleena?
I-levonorgestrel IUD ifakwe ngaphakathi kwilungu lobufazi kwaye ibekwe kwisibeleko ngugqirha.
Unokuziva iintlungu okanye isiyezi Ngexesha lokufakwa kwe-IUD, kwaye unokuba nokopha kancinci kwilungu lobufazi. Tshela ugqirha wakho ukuba ezi mpawu zihlala ngaphezulu kwemizuzu engama-30.
ipilisi emhlophe 104 iioxycodone
I-IUD akufuneki iphazamisane nokwabelana ngesondo, ukunxiba itampu okanye ikomityi yokuya exesheni, okanye ukusebenzisa amanye amayeza obufazi.
Ugqirha wakho kufuneka ahlole i-IUD emva kweeveki ezimbalwa ukuze aqiniseke ukuba isekhona. Uya kudinga iimviwo zonyaka zangasese kunye nePap smears.
Unokuba namaxesha angaqhelekanga kwiinyanga ezi-3 ukuya kwezi-6. Ukuhamba kwakho kunokuba lula okanye kube nzima, kwaye amaxesha akho anokuyeka emva kweenyanga ezininzi. Tshela ugqirha wakho ukuba awunalo ixesha leeveki ezi-6 okanye ukuba ucinga ukuba ukhulelwe.
IUD inokuzimela ngokwayo. Emva kwexesha ngalinye lokuya exesheni, qiniseka ukuba usenokuziva usiva umtya wokususwa xa kuvulwa umlomo wesibeleko sakho.
Biza ugqirha wakho kwangoko ukuba awukwazi ukuziva imitya, okanye ukuba ucinga ukuba i-IUD yehle isezantsi okanye iphume esibelekweni sakho, ngakumbi ukuba unentlungu okanye ukopha. Sebenzisa indlela engeyiyo-hormone yolawulo lokuzalwa (ikhondom, uvalo , ikepusi yomlomo wesibeleko, okanye isiponji sokucwangcisa) ukuthintela ukukhulelwa de ugqirha wakho akwazi ukubuyisela i-IUD.
Ukuba ufuna ukuba neMRI (imaging resonance imaging), xelela abo bakukhathaleleyo ngaphambi kwexesha ukuba unayo iUD.
IUD yakho inokususwa nangaliphi na ixesha unquma ukuyeka ukusebenzisa ulawulo lokuzalwa. UMirena okanye Liletta kufuneka isuswe ekupheleni kweminyaka emi-6 yokunxiba. UKyleena kufuneka isuswe emva kweminyaka emi-5, kwaye USkyla kufuneka isuswe emva kweminyaka emi-3. Ugqirha wakho angafaka isixhobo esitsha ukuba unqwenela ukuqhubeka nokusebenzisa olu hlobo lolawulo lokuzalwa. Ugqirha wakho kuphela kufuneka asuse i-IUD. Sukuzama ukususa isixhobo ngokwakho.
Ukuba uthatha isigqibo sokusebenzisa indlela eyahlukileyo yolawulo lokuzalwa, kungafuneka uqale ukuyisebenzisa kwiveki ngaphambi kokuba i-IUD yakho isuswe.
Kuba i-IUD iqhubeka ikhupha idosi esezantsi ye-levonorgestrel, ukuphosa idosi akwenzeki xa usebenzisa le fomu ye-levonorgestrel.
Ukugqithisa kwe-levonorgestrel ekhutshwe kwinkqubo ye-intrauterine akunakwenzeka ukuba kwenzeke.
Yintoni endifanele ukuyiphepha ngelixa ndisebenzisa uKyleena?
Kuphephe ukuba namaqabane angaphezulu kwesinye. IUD inokuwunyusa umngcipheko wokuba nesifo esibuhlungu, esidla ngokubangelwa zizifo ezidluliselwa ngeentlobano zesini. UKyleena akazukukukhusela izifo ezidluliselwa ngeentlobano zesini , kubandakanya Intsholongwane kaGawulayo nesifo sikagawulayo. Ukusebenzisa ikhondomu yeyona ndlela yokuzikhusela kwezi zifo.
Fowunela ugqirha wakho ukuba iqabane lakho owabelana nalo ngesondo livela kwi-HIV okanye isifo esosulela ngokwabelana ngesondo, okanye ukuba ngaba unalo naluphi na utshintsho kubudlelwane bezesondo.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeKyleena
Fumana uncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuba unayo iimpawu negazi lakho : urhwebo ; ukuphefumla nzima; ukudumba kobuso bakho, imilebe, ulwimi, okanye umqala.
Fumana uncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuba unentlungu ebuhlungu kwisisu okanye kwicala elingaphantsi. Oku kunokuba yi- umqondiso wokukhulelwa kweetyhubhu.
IUD inokungena eludongeni lwesibeleko, okanye igcwale (yenze umngxunya) esibelekweni. Ukuba oku kuyenzeka, isixhobo asinakuphinda sithintele ukukhulelwa, okanye sinokuhamba ngaphandle kwesibeleko kwaye sibangele amanxeba, usulelo, okanye ukonakala kwamanye amalungu. Ugqirha wakho unokufuna ukususa isixhobo.
Iintlanzi ezinzima okanye iintlungu zangasese, iintlungu ngexesha lokwabelana ngesondo;
utywala kakhulu okanye uvakalelo olukhanyayo;
kakhulu intloko ebuhlungu ;
ukuphuma kwegazi elinzima okanye eliqhubekayo, izilonda zangasese, ukukhutshwa kwilungu lobufazi Amanzi, ukuphuma okunukayo, okanye ngenye indlela engaqhelekanga;
ulusu olukhanyayo, ubuthathaka, ukugruzuka okulula okanye ukopha, umkhuhlane, Ukugodola, okanye ezinye iimpawu zosulelo;
inyongo (ngatyheli kolusu okanye kwamehlo); okanye
ngesiquphe ukuba ndindisholo okanye ubuthathaka (ngakumbi kwicala elinye lomzimba), ukudideka, iingxaki ngombono, ubuntununtunu ekukhanyeni.
iintlungu zangasese, iintlungu okanye ukuya exesheni okungaqhelekanga, utshintsho kwiipateni zokopha okanye ukuhamba;
ukudumba kwelungu lobufazi, ukurhawuzelela okanye usulelo;
iintlungu zexeshana, ukopha, okanye isiyezi ngexesha lokufakwa kwe-IUD;
ii-cysts zamaqanda (iintlungu zangasese ezithi shwaka kwinyanga ezintathu);
ndingathatha i-claritin kunye ne-zyrtec
isisu esibuhlungu, isicaphucaphu , ukugabha , ukudumba ;
intloko ebuhlungu , migraine, ukudakumba, utshintsho lweemvakalelo;
umqolo obuhlungu, ukuthamba kwebele okanye iintlungu;
ukutyeba kwakho, induna , ulusu olunamafutha, utshintsho ekukhuleni kweenwele, ukulahleka komdla kwisini; okanye
ukukhukhumala ebusweni bakho, ezandleni, emaqatheni, okanye ezinyaweni.
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela uKyleena?
Amanye amachiza anokuchaphazela i-levonorgestrel, kubandakanya amayeza kunye namayeza e-counter, iivithamini , kunye iimveliso zemifuno . Xelela ugqirha wakho ngawo onke amanye amayeza owasebenzisayo.
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 9.01.
Ukusetyenziswa kwegazi lwenamba ngaphakathi
yaz iziphumo zolawulo lokuzalwa
ubude bentshukumo yeclonazepam
Iziphumo zokuyeka i-spironolactone